Ampirisihin’ny CES hifampitory ireo kandidà… – MyDago.com aime Madagascar
Ampirisihin’ny CES hifampitory ireo kandidà…
Hihazakazaka ny asan’ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana, satria tsy maintsy vita mialoha ny 20 aogositra izao, avokoa ny fanitsiana ny lisitr’ireo kandidà ho filoham-pirenena, mba ahafahan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ho an’ny tetezamita (Cenit) manamboatra ny biletà tokana. Efa nanome fe-potoana, hatramin’ny omaly 15 aogositra rahateo ny Gic – M ary eo amin’ny herinandro eo ho eo kosa sisa ny fe-potoana nomen’ny Vondrona Eoropeanina (UE) antsika momba izany.
Mba ahatongavana amin’izany, anisan’ny andrasana amin’ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (CS), araka ny didy hitsivolana nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), ny fanomezana alalana ireo kandidà sy ny mpanasonia ny sori-dalana ary ireo lehiben’ny andrimpanjakana mitory sy mangataka amin’ny CES ny hamerenana indray ny fandinihana ny maha kandidà azy 41. Ho tonga amin’ny fanilihana ireo ambara fa tsy nanara-dalàna izany.
Hanaraka ny baikon’ny Gic – M
Midika ireo fa hampifandrafy ny samy kandidà na koa ny lehiben’ny andrimpanjakana amin’ny kandidà io didy io. Eo am-pikatsahana fitoniana anefa isika. Efa miditra sahady ny paikadin’ny sehetra iraisam-pirenena amin’ny fampizarazarana . Ny kandidà sy ny mpanao politika no hanomboka azy. Aorian’izany, inona no hiseho, mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana raha ireo no jerena ? Ho raikitra ny lonilony sy ny fifampiandrasana kendritohana . Iza ireo lehiben’ny andrimpanjakana hitory ny kandida, ambara fa tsy manara-dalàna ? Mbola azo ambara fa lehiben’ny andrimpanjakana manaja ny tsy fiandaniana sy tokony ho mampihavana izany ?
Hanipy hoditr’akondro ny hafa…
Tsy niandry ela koa anefa ireo eo anivon’ny “Vondron’ny kandidà” ary nampiaka-peo sahady sy efa nametraka avy hatrany ny fitoriana eny Ambohidahy, mba hanilinihana ireo kandidà telo, tsy levon’ny vavon’ny iraisam-pirenena. Nanome vahana azy ireo ho amin’ny fisoketana sy fitoriana eo amin’izy samy kandidà ny zo nomena azy ireo, amin’ny alalan’ilay didy nankatoavin’ny HCC. Ny hamingana sy hanipy hoditr’akondro ny hafa aza moa atao, mainka fa efa nomena alalana malalaka tsotra izao.
Etsy andaniny, mety tsy matoky tena sy matahotra hifaninana eny ambony kianja koa izy ireo ka izao manaraka ny baikon’ny Gic – M izao. Hitory na hitaky ny hialan’ny kandidà hafa, ankoatra azy telo koa anefa ireto “Vondron’ny kandidà” ireto. Raha manana ny porofo rehetra sy mitombina, tsy olana, saingy raha hikendrena olona na noho ny tery vaimantan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena fotsiny, ho tonga amin’ny fifanjevoana eto ny raharaha.
Tsy ivalozana ny didin’ny CES
Ho an’ny filatsahan-kofidin-dRajoelina manokana, efa nihoatra ny fe-potoana tokony ho izy ny nametrahana ny antontan-taratasiny. Tsy ho afa-bela ny tenany. Efa manana ny fiarovan-tenany kosa anefa Ravalomanana Lalao sady efa nampahafantarina ny Gic M izany. Efa nilaza rahateo i Neny sy ny ankolafy manohana azy fa tsy hisintaka izany. “Tsy azo ivalozana ny didy navoakan’ny CES, araka ny voalazan’ny Lalàmpanorenana ny 2007 sy ny nolanian-dry zareo tamin’ny 2010… Tsy hiala i Neny ary efa fantatry ny Gic izany. Hanohitra hatramin’ny farany amin’ny herinay rehetra izahay”, hoy ny Me Razafimanantsoa Hanitra, ny talata teo.
Eo am-piandrasana izany, mitaky paikady mazava, na drafitra B na C saingy mafy orina, miainga amin’ny katro-doha sy don-tabatra mihitsy ny mpomba ny ankolafy Ravalomanana. Tsy fotoanan’ny fifampitsikerana na hifanilihana andraikitra izao fa hanehoana ny firaisankina sy ny fampitambarana ny hery. Efa tsy an-kandasitra intsony mantsy eto ny raharaha…
Hametra-pialàna tsy ho kandidà…
Auteur Solo Razafy*Publié le 14 août 2013 14 août 2013 Catégories Politique
12 pensées sur “Ampirisihin’ny CES hifampitory ireo kandidà…”
Raha mangataka ny fampialàna ireo Mpitarika ao @ Ankolafy Ravalomanana ny « Mpanenjika », izahay kosa MANGATAKA SY MITAKY ny hampialàna an’i Omer BERIZIKY.
Ho an’ireo mihezaka manenjika etsy sy eroa : Ireny ahay no olona mba TOKONY HO TAKIANA ny fialàny.
NY AN-KOATRA IZAY TSY MITOMBONA, fa mbola alahelo hava-manana ihany !!! Gasy eeee!
Mba tiako ho fantatra : Nahoana ireo olona tonga ao @ Magro no mbola mitehaka sy manohana ireo Mpitarika mafana fo ireo ?
Ary mba nankaiza ilay « mpisolelaka » mihazakazaka eo anilan’i Neny ??? Tssss
14 août 2013 à 19 h 32 min
NY RAHARAHA ANY EGYPTE ANDROANY NO MISEHO DIA NY FIHETSIKY IREO FIRENENA AOTRAN I LAFRANTSA IZAY MANOAHANA NY MPITONDRA AKEHITRINY SY TSY NANOHITRA NY FANONGANANA ILAY FILOHA VOAFIDY MBAHOAKA dia nisan ny fositry ny zavadoza miseo any egypte androanay .
La france à Madagascar ne fait que semer la merde ,elle a Rajoelina comme bras droit ,elle céee des groupes de petites mains pour foutre la merdre aux malgaches en pleine figure .
Je craint fort que le CES fait pati de ce groupe de semeurs de merde .
.IL FAUT SAVOIR QUE TOUTES PSEUDOS INSTITUTIONS CREES depuis l’admnistration Franco Rajoelina ce sont le pro Rajoelina qui sont majoritaires.
15 août 2013 à 4 h 15 min
T as raison Michel. Que faire? J’ai une chose bien claire en tête à propos de ces francaix et pseudo francais. Mais le mment n’est pas encore propoice.
15 août 2013 à 9 h 15 min
Omer beriziky ve , alefaso ny vola dia ekeko daholo izay asainareo ataoko efa haiko tsara ny mody mitabataba sy mody tsy d’accord @ ataonareo fa izaho mombanareo foana ry akama « Fozaorana » « Sadec » »Frantay » , aza matahotra fa PM VONGATAY anie za e
15 août 2013 à 9 h 49 min
Izay no maha ALIKA TSISY FE VOZONA AZY AVY KOA AZO AMPIADIANA MORA2.
Iza no TALOHA ALOHA Njara ,ILAY SONIA SA BERIZIKY????IZA NO NANAO SONIA???DIA IZA NO NIFIDY
AN’i BERIZIKY????raha tsy vita ve ny fankatoavana an’i domelina ho voafidy teo Beriziky izay SARIBAKOLY BEU
an’i la frantsa sns…..izay manipy vola dia mody GISA razoky fa » TSY FANTATRO , IZAHO TSY NANIRAKA » dia
VITA TOMPOKO tsisy toany ????????
Raha ny tehaka koa no andrasana eo @ Magro dia BRAVÔÔÔ……. ny TEHAKA MANOVA ZAVATRA ôhhhh
15 août 2013 à 10 h 27 min
Teha-maina no mendrika an’ireo nampiditra an’i Madagascar ao anatin’izao fahavoazana manara-penitra izao ôôô !
15 août 2013 à 10 h 29 min
Izaho aloha dia tsy misy teny firy avoaka fa tampim-bava e !
15 août 2013 à 11 h 09 min
hatraty io tsy beteny io fa miandry hetsika fotsiny .
Izay mangina ve volamena?????
hietsika sa tsy hietsika a???TOKONY!!!!
Izay lazaiko tsy tafavoaka oà !!
19 août 2013 à 22 h 45 min
Ka ilay tolona ange hafahafa be iany Ranavalona a ! Izay be teny voatehaka, izay te hietsika voafelaka !!! kou aiza ary no hisy vanona ny raha ?
Précédent Article précédent : Raha tsy miasa araka ny tokony ho izy ny CES : Na isika hanohy ny làlana na isika hiala ao anaty rafitra
Suivant Article suivant : FFKM : Nampivory ireo solontena telo avy amin’ny movansy efatra